ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် မဲဟောင်ဆောင် သစ်တောတွင်းမှာ ဒီကနေ့ပျက်ကျသွားခဲ့တဲ့ ထိုင်းလေတပ်ပိုင်U-17 aircraft အပေါ့စားလေယာဉ်ငယ်ပေါ်လိုက်ပါသွားသူ
လေတပ် အရာရှိ လေးဦးထဲက သုံးဦးသေဆုံးသွားပြီး တဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
The U-17 Observatory falls into deep forest of Thai Myanmar
border in area south of Huay Pung, Huay Pha District, Mae Hong Son .Last3Lt officers wear death and only one officer was seriously injured.
ထိုငျး မွနျမာနယျစပျ မဲဟောငျဆောငျ သဈတောတှငျးမှာ ဒီကနပေ့ကျြကသြှားခဲ့တဲ့ ထိုငျးလတေပျပိုငျU-17 aircraft အပေါ့စားလယောဉျငယျပျေါလိုကျပါသှားသူ လတေပျ အရာရှိ လေးဦးထဲက သုံးဦးသဆေုံးသှားပွီး တဦးဒဏျရာပွငျးထနျစှာရသှားခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ။
ဒီနေ့ ညနေ ၅နာရီ ၄၅ မိနစ်က ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးသည် (၉၀) လိုက်လာသွားတဲ့ ခရီသည်တင် ရေယာဉ် ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းမိ
ဒီကနေ့ ညနေ ၅နာရီ ၄၅ မိနစ်က ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ပူခက် ခရီးသည် (၉ ၀) လိုက်လာသွားတဲ့ ခရီသည်တင် ရေယာဉ် ပင်လယ်ပြင်မှာ လှိုင်းမိပြီး တိမ်းနေမှောက် သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် ။
လှေပေါ်မှာ ခလေး ၃၉ ယောက် ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လိုင်စင်နံပါတ် 6000-02210 Phoenix PC ရေယာဉ်ဟာ ရာချာကျွန်း
အနီးမှာ မှောက်ခဲ့တာလို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖေါ်ပြနေပါတယ် အသေးစိတ်ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။
Quick !! Boats Phoenix PC runs down to Coral Island Phuket.
There’s crew were lost 42
yacht was capsized 39 people marooned in the se
Thai passenger boat
ဒီကနေ့ ညနေ ၅နာရီ ၄၅ မိနဈက ထိုငျးနိုငျငံ တောငျပိုငျး ပူခကျ ခရီးသညျ (၉ ၀) လိုကျလာသှားတဲ့ ခရီသညျတငျ ရယောဉျ ပငျလယျပွငျမှာ လှိုငျးမိပွီး တိမျးနမှေောကျ သှားခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ ။
လှပေျေါမှာ ခလေး ၃၉ ယောကျ ပါတယျလို့ သိရပါတယျ။
လိုငျစငျနံပါတျ 6000-02210 Phoenix PC ရယောဉျဟာ ရာခြာကြှနျး
အနီးမှာ မှောကျခဲ့တာလို့ထိုငျးသတငျးတှမှောဖျေါပွနပေါတယျ အသေးစိတျဆကျလကျတငျပွပေးပါမယျ။